In aad furato shirkad gaar ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / In aad furato shirkad gaar ah
Tima-jarayaasha inta badana waa shirkadleey gaar ah. Masawirqaade: Colourbox
Haddii aad dooneeyso in aad shirkad furato, waxaad caawinaad iyo talo ka heli kartaa hey'adooyin kala duwan, tusaale ahaan ALMI iyo Xafiiska shaqada. Warbixinno badan oo ku saabsan shirkad furasho waxaad ka heleeysaa boggaga: www.tillvaxtverket.se ama www.verksamt.se.
Akhriso dheeraad ku saabsan sida loo furto shirkad gaar kuu ah www.tillvaxtverket.se. Akhriso dheeraad ku saabsan sida loo furto shirkad gaar kuu ah www.verksamt.se.
Hey'adda cashuuraha waxey meelo badan ku qabataa kulamo lacag la'aan ah. Waxaa jira kulamo laguugu tala galay haddii aad billaabeysid shirkad waxeyna Hey'adda cashuuraha ku tusineysaa sida aan u diiwangalineysid shirkaddaada waxeyna kusiineysaa talooyin la xiriira billaabidda shirkad. Waxaad kaloo heleysaa fursad aad kula kulantid dad ka socda urrurada lookalka ah. Waxey kuu sheegayaan caawimaadda eey ku siin karaan haddii aad tahay shirkad billaabe cusub.
Warbixin dheeraad ah ka akhriso bogga Hey'adda cashuuraha: www.skatteverket.se
IFS Rådgivning waxeey ka mid ah ALMI. Waxaana loogu tala galay soo galooytiga rabo in ee shirkad furtaan. IFS Rådgivning waxeey talo bilaash ah kuu dhibtaa luuqada kala duwan. IFS waxeey ku taalo qeeybo kala duwan oo Iswiidhan ku taalo.
In dheeraad ah ka akhriso bogga internetka: www.almi.se